ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပျားရည်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူး (၄)မျိုး - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပျားရည်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူး (၄)မျိုး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပျားရည်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူး (၄)မျိုး
ပျားရည်ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိက ချိုမြိန်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ ပြည့်ဝခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်က ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချိုတဲ့အရာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးသလား? ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ပျားရည်စားသုံးသင့်/မသင့်၊ ၎င်းရဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အန္တရာယ်များနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို နားလည်စေဖို့ မေမေတို့အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပျားရည်ကို သတ်မှတ်အပူချိန်ထိ အပူပေးထားတာဖြစ်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ စိတ်ချရပါတယ်။ ပျားရည်ကို ဒီတိုင်းသောက်တာမဟုတ်ဘဲ ရေနွေးနွေးထဲမှာ ထည့်သောက်ပေးတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်းတစ်ခုက botulism ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အစာခြေစနစ် နုနယ်တဲ့ တစ်နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာသာ ထိခိုက်မှု ရှိတာပါ။ လူကြီးတွေဟာ botulism အစာအဆိပ်သင့်ရောဂါကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် တစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ ခုခံနိုင်စွမ်း မပြည့်ဝသေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပျားရည်ရဲ့ အာဟာရ အချက်အလက်များ
ပျားရည်ဟာ အာဟာရဂိုဒေါင်ကြီးတစ်ခုပါ။ ဘယ်လိုအာဟာရတွေ ပါဝင်သလဲဆိုတာ အောက်မှာကြည့်လိုက်နော်
ပျားရည် တစ်ခွက်(၃၃၃ဂရမ်)ဟာ အောက်ပါ ကယ်လိုရီများနဲ့ အာဟာရများကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ပျားရည်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး
ပျားရည်ဟာ အာဟာရတွေအပြင် glucose၊ fructose ကဲ့သို့သော သကြားတွေ ကြွယ်ဝပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်
ပျးရည်ရဲ့ antibacterial နှင့် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ၎င်းက အစာအိမ်အက်ဆစ်ကို လျော့ပါးစေခြင်းဖြင့် ရင်ပူတာတွေ၊ အသေးစား အပူလောင်တာတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေကိုလည်း ကုသပေးပါတယ်။
၂။ အိပ်မပျော်တာကို သက်သာစေပါတယ်
ပျားရည်ရဲ့ hypnotic လုပ်ဆောင်မှုက အိပ်မပျော်တာကို ကျော်လွှားဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ပျားရည် ၁ဇွန်းကို နွားနို့နဲ့ ရောသောက်ရင် အနှောက်အယှက်ကင်းကင်း အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
၃။ အအေးမိ၊ ချောင်းဆိုးတာကို သက်သာစေပါတယ်
ပျားရည်ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင် ဂုဏ်သတ္တိများက အအေးမိခြင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ပျားရည်က ချောင်းဆိုးခြင်းကို နှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာ ထိရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချောင်းဆိုးခြင်းကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ၎င်းကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်/ မရဘူးဆိုတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေအထောက်အထားတွေ မရှိသေးပါဘူး။
၄။ လည်ချောင်းနာတာကို လျော့ချပေးပါတယ်
ပျားရည်ရဲ့ Anti- inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများက လည်ချောင်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ လီမွန် လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် ဂျင်းလက်ဖက်ရည်ထဲကို ပျားရည်ထည့်ပြီး သောက်ပေးတာက လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေပါတယ်။
လေ့လာမှုမှာ ပျားရည်ကို ပုံမှန်သောက်သုံးရင် ကိုယ်တွင်းအနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Helicobacter pylori ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ ကြီးထွားမှုကို လျော့ကျစေကြောင်း ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
၆။ ဦးရေပြား ကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပါတယ်
ပျားရည်ရဲ့ သဘာဝ antibacterial ကလည်ချောင်းနာတာကိုသာ သက်သာစေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဦးရေပြားယားယံခြင်းနဲ့ ဘောက်တွေကို ဖယ်ရှားခြင်းမှာ ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာ ပျားရည်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဦးရေပြားပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ပျားရည်ရဲ့ အန္တရာယ်များ
ပျားရည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းက အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်
အင်ဆူလင် တိုးစေပါတယ်။ ။ ပျားရည်က သွေးတွင်းသကြားအဆင့်ကို မြှင့်တတ်စေပြီး တစ်နေ့ကို fructose 25 ဂရမ်ထက်ပိုပြီး စားသုံးတာက အင်ဆူလင် ခုခံအားကို ပိုဆိုးစေလို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မရှိပါဘူး။
ဗိုက်အောင့်တာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ။ပျားရည်က ဗိုက်အောင့်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာနဲ့ ဗိုက်ပွတာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ပျားရည်အလွန်အကျွံစားသုံးတာက သင့်ခန္ဓာကိုယ် အက်ဆစ် ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစာခြေစနစ် နှေးကွေးစေပါတယ်။
သွားကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ။ ပျားရည်မှာ သကြား level မြင့်မားမှုက သွားပိုးစားခြင်းနှင့် သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်တတ်လာစေပါတယ်။ ။ ပျားရည်မှာ ကယ်လိုရီများတာကြောင့် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို တတ်လာစေပါတယ်။
ပျားရည်ဘယ်လောက်ပမာဏက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ အန္တရာယ်ကင်းသလဲ?
တစ်ဇွန်းမှာ ခန့်မှန်းခြေ ၆၀ကယ်လိုရီပါဝင်တာကြောင့် တစ်နေ့ကို ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း (၃)ဇွန်း မှ (၅)ဇွန်း (၁၈၀ မှ၂၀၀ ကယ်လိုရီ)သောက်သုံးတာက အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ရိုးရိုးသကြားမှ ကယ်လိုရီဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း လိုအပ်တဲ့ စုစုပေါင်းကယ်လိုရီရဲ့ ၁၀%ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။
ကျန်းမာတဲ့ အင်ဇိုင်းများကို ပယ်ဖျက်ပေးတာကြောင့် အဖျော်ယမကာ သို့မဟုတ် ရေပူပူထဲမှာ ပျားရည်ကို မထည့်ပါနဲ့။ ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာပဲ ထည့်သောက်ပါ။
ပျားရည်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့သတ္တုဓါတ်များက ဗီတာမင်တွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပယ်ဖျက်နိုင်တာကြောင့် ဗီတာမင် စီနဲ့ ဒီကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပျားရည်ကို မထည့်ပါနဲ့။
အစာမကြေခြင်းကို ဦးတည်စေပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် တို့ဖူးထဲကို ပျားရည်ထည့်တာ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Previous articleအိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔က်င့္သုံးသင့္တဲ့အမူအက်င့္အခ်ိဳ႕
Next articleစစ်တမ်းတွေအရ မောင်နှမထဲမှာ အငယ်ဆုံးကလေးရဲ့ ထူးခြားချက်လေးများ